एटिट्युडकै कारण म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ: सन्दीप लामिछाने :: सीताराम कोइराला :: Setopati
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्रिकेट लिगका लागि धेरै देशको भ्रमण गर्ने खेलाडीमध्ये शीर्ष स्थानमा छन्।विश्व क्रिकेटको चर्चित म्यागेजिन 'क्रिकेट मन्थ्ली' को तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तानका नाजिबुल्लाह जार्डन र सन्दीपले अक्टोबर २०१८ देखि सेप्टेम्बर २०१९ सम्म ८ देशमा क्रिकेट खेलिसकेका छन्। सन्दीप टी–२० मा सबैभन्दा बढी बल बलिङ गर्नेमा दोस्रो स्थानमा छन्। अफगानिस्तानका रसिद खानले १३५५ बल बलिङ गरेका छन् भने सन्दीपले ‍९८५ बल।
पछिल्लो समय इंग्ल्यान्डमा हुन लागेको नयाँ क्रिकेट 'द हन्ड्रेड' मा सन्दीप एक लाख पाउन्डमा बिक्री भए। व्यवसायिक करिअरसँगै विश्व क्रिकेटमा आफ्नो पहिचान बनारहेका सन्दीप पछिल्लो समय विवादमा समेत परे। राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गरेकोमा सन्दीपको विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। व्यवसायिक करिअरमा हात पारेको सफलतासँगै विवादको विषयमा सन्दीपसँग सेतोपाटीका सीताराम कोइरालाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा डेब्यू गरेको साढे ३ वर्षमै तपाईंको व्यवासायिक करिअरले फड्को मारेको छ। सफलतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
क्रिकेट खेलाडीको रूपमा मलाई कहिल्यै पनि पछाडि हेर्न परेन। सुरुवातदेखि मैले भिन्न प्रकारको एटिट्युड राखें जसले गर्दा एउटा खेलाडीले पाउने सम्मान र जीवनमा चाहिने महत्वपूर्ण कुरा पाएँ। फ्यानहरूबाट कमाएको सम्मानलाई नै म सबैभन्दा ठूलो सम्मान मान्छु। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि म यति छिटो यहाँसम्म पुग्छु अथवा लगातार मेरो यस्तो प्रदर्शन भइरहन्छ होला, मैले आफूलाई एकचोटी पनि एकदमै तल गएको देख्दिनँ। म विगतको समीक्षा गर्छु, फेरि हेर्छु, मूल्यांकन गर्छु आफूलाई। के कुरामा म चुकें पहिला, बलिङमा कहाँ कमजोर भएँ भनेर। त्यसरी मूल्यांकन गर्दागर्दै त्यो एटिट्युड राख्दाराख्दै म यहाँसम्म पुगे।
आइपिएल खेलेपछि तपाईंको चर्चा एकाएक चुलियो। आइपिएलपछि अन्य लिगको यात्रा कसरी सम्भव भयो?
मलाई लाग्छ- यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन कि म बंगलादेश प्रिमियर लिगमा छनोट भएको थिएँ। केही कारणबस मलाई जान दिइएन। मैले पहिलो अवसर बंगलादेश प्रिमियर लिगमै पाउनु पर्ने हो। ठीक छ, जे भयो त्यो भयो। यो सबै भित्री कुरा हो। आइपिएलमा गएँ, राम्रो प्रदर्शन गरें। पहिलो सिजनमा तीन खेल खेल्न पाएँ। त्यसपछिलगत्तै सबै लिगमा बिस्तारै बिस्तारै समेटिन थालें। म पैसाको पछाडि लागेर कहिल्यै पनि भागिनँ। मलाई के लाग्छ भने म त्यति ट्यालेन्टेड छु भने, मैले पाउनु पर्ने मूल्य पाउँछु। म कहिले पनि पछाडि हट्दिनँ। सुरूको सिपीएलकै कुरा गर्दा म जम्मा ५ हजार डलरमा छनोट भएको थिएँ किनभने मैले त्यतिबेला त्यति नै डिजर्भ गर्थें। प्रदर्शन गर्दागर्दै आफैंलाई जब लाग्छ कि यो कुराको लागि म लायक छु त्यतिबेला एटिट्युड, बडी ल्याङ्गवेज र कन्फिडेन्सले नै त्यहाँसम्म पुर्‍याउँछ। र, त्यही कुराले भविष्य पनि निर्धारण गर्छ।
क्रिकेटका लागि विश्व भ्रमण नै गरिसक्नुभयो। कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ?
खेलाडीले पाउने सम्मान नै मेरो लागि ठूलो कुरा हो। पैसा सबैले बराबर पाउँदैनन्। केही फ्रेन्चाइज लिग खेलिरहेको छ, केही खेलिरहेको छैन। त्यो धेरै ठूलो कुरा होइन। तर मेहनत, इमानदारिता कतिको छ त्यो कुराले पनि निर्धारण गर्छ। आलोचना त सबै खेलाडी हुन्छ राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि। अब फ्यानहरूले यति माया गर्दिनु भएको छ। करिअर सुरू गर्दा मेरा फ्यान कोही पनि थिएन। राम्रो होस् भनेर चाहने घरपरिवारमात्र थियो। आज पनि मलाई पाँच-सात जना फ्यानले नराम्रो भन्दैमा त्यसलाई म नराम्रो मान्दिनँ किनभने सय जनामा पाँच जनाले नराम्रो भन्दैमा त्यसमा केही पनि आत्तिनु पर्ने कुरा हुँदैन। ९० प्रतिशतले त राम्रो भनिरहनुभएको हुन्छ। आफूले कति गर्न सकिरहेको छ त्यो कुरा सबैले ख्याल गर्‍यो भने त्यसले नेपाल क्रिकेटकै लागि राम्रो हुनेछ।
देशलाई चिनाउने अवसर पाएको छु। नेपाली क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने महत्वपूर्ण खेलडीकै रूपमा आउँछ। त्यो एक्सपोजर, अवसर र अनुभवले नै गर्दा सबै महत्वपूर्ण बन्दै जान्छ। हामी पारस खड्कालाई किन नेपाली क्रिकेटको महत्वपूर्ण खेलाडी मान्छौं? किनभने उहाँले आफैंलाई प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ। अरू खेलाडीले पनि त्यसरी नै प्रमाणित गर्नुभएको छ। यसरी आफूलाई प्रमाणित गर्दै जाँदा नि त्यसले नेपाली क्रिकेटलाई राम्रो गर्छ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो एक्स्पोजर, सुविधा र मैदानहरू भयो। हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेकै खेल मैदान हो जुन हामीलाई एकदम अभाव भइरहेको छ। खेलाडीको तलबको कुरामा हामी एकदम पछाडि छौं।
नेपाली क्रिकेटमा सन्दीपजस्ता प्रतिभाको कमी छैन। के कारणले अरू खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय एक्पोजर पाउन सकिरहेका छैनन् जस्तो मानिन्छ?
जीवनमा हतार गर्नु भएन कहिले पनि। सन्दीप लामिछाने पुवुदु सर (दासानायके) ले पिक गरेर यहाँसम्म पुग्यो तर त्योभन्दा पहिले के गरिरहेको थियो, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन।
त्योभन्दा अगाडिको संघर्ष कसैले पनि हेर्दैन। आइपिएलपछि सन्दीप लामिछानेलाई कतिले चिन्यो तर त्योभन्दा अगाडि सन्दीप लामिछाने के थियो त्यो कसैले पनि बुझ्न खोजेन। हामी खेलाडीलाई एकदमै छिटो जज गर्छौं। म आफ्नो जीवनमा सधैं के कुरा मान्छु भने हामीले त्यो प्रकारको मेहनत गरेका छौं भने र सही समयमा डेलिभर गर्छौं भने भाग्यले त्यतिबेला साथ दिन्छ। जस्तै पुवुदु सर चितवन आउनुभएको थियो। मेरो लागि त्यो भाग्य थियो तर त्यहाँ सयौं जना हुनुहुन्थ्यो तर किन उहाँले मलाई रोज्नुभयो? पक्कै केही भएर होला, केही देख्नुभयो होला पछि नेपाली क्रिकेटलाई राम्रो हुन्छ भनेर। त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्यौं भने हामीलाई त्यति गाह्रो पनि हुँदैन होला।
नेपाली क्रिकेट टिमले नयाँ कप्तान पाएको छ। नयाँ कप्तानबाट तपाईंले के अपेक्षा गर्नु भएको छ?
मलाई यस्तो कुरामा त्यति धेरै चासो पनि छैन। जो पनि आउँछ टोलीमा एकता बनिरहोस्। यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। टोलीलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा ज्ञानेन्द्र दाइलाई यो सबै थाहा होला। कति कमजोर पक्ष पनि छन् हाम्रो नेपाल क्रिकेटमा त्यो सबै कुराहरूलाई हटाउन पनि एकदम जरूरी छ। धेरै कुराहरू छन् जुन भन्न सकिँदैन। त्यो कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ होला। राम्रो कुरा के छ भने उहाँले पहिले पनि नेपालको लागि कप्तानी सम्हाल्नुभएको छ, उपकप्तान यतिका वर्ष भइसक्नुभएको छ। त्यो कुरा उहाँको लागि राम्रो नै होला।
पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेट टिममा ओमन र सिङ्गापुर भ्रमणका क्रममा ड्रेसिङ रुममा नै मतभेद भएको सार्वजनिक भयो? मतभेद हुँदा खेलमा पनि असर गर्छ होला नि?
एकदमै धेरै असर पर्छ। किनभने त्यतिबेला (ओमन र सिङ्गापुर भ्रमण) त्यस्तै अवस्था भइरहेको थियो। मलाई थाहा भएन त्यो बेला के खराब भएको थियो। चारैतिरबाट नराम्रो कुरा भइरहेको थियो। त्यतिबेला सबैले सकारात्मक भएर खेलेको भए। धेरै नचाहिँदो कुरा भइरहेको थियो तर ठीक छ जीवनमा सधै खुसीका पल हुँदैन। अगाडि बढ्नु छ भने जबसम्म अर्को स्वाद लिइएन भने जीतको पनि मज्जा हुँदैन। तर मैले अघि पनि भने एकता चाहि महत्वपूर्ण छ अहिले।
नेपालले बंगलादेशमा इमर्जिङ टिम्स कप खेल्दैछ। तर तपाईं अहिले टी–१० को लागि युएई जाँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय टिम छाडेर व्यवासयिक लिग किन रोज्नुभयो?
भविष्यमा नेपाली क्रिकेटका लागि चाहिने खेलाडीलाई ग्रुम गर्नुपर्छ। अहिले यो खेलाडीले चान्स पाएन, यो भएन त्यो भएन भन्ने छ। त्यसैले कुनै खेलाडीलाई मौका दिने यो राम्रो अवसर हो। खेलाडीले अवसर पाएन त्यो खेलाडीले अवसर पाएन यो भएन, त्यो भएन। सही समय आउँछ कुनै खेलाडीलाई राम्रो अवसर दिन सक्छौं। अरू देशको यू-२३ टोली आइरहेको छ। अरू देशबाट सिनियर टिम आएको भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो। जसरी मैले सिपिएलसमेत छोडेर राष्ट्रिय टिम खेल्न आएको छु। १२ बजे खेल सकेर ४ बजेको फ्लाइट समातेर रातरात आएको पनि छु।
यहाँ पनि म जान सक्थें। तर यो प्रतियोगिताले हामीलाई केही असर पनि पार्दैन। कुनै खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शनमा पनि असर गर्दैन। त्यही भएर नयाँ खेलाडीले अझै अवसर पाओस् भन्ने हो। मैले जति एक्स्पोजर अरू खेलाडीले पाएका छैनन्। अरू खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव होस् भन्ने हो। त्यो नयाँ प्लेयरले पाऊन् भन्ने हो।
नेपाल भ्रमणमा आएको एमसिसीविरूद्धको एकदिवसीय टिममा भए पनि तपाईंले खेल्नुभएन। मैदानमा आएर अभ्यास गर्नु भयो तर टिमको ड्रेसिङ रूममा जानु भएन। घरेलु प्रतियोगिता प्राथमिकतामा पर्न छाडेको हो?
त्यो मेरो व्यक्तिगत रोजाइ थियो। भित्री कुरा धेरै छन्। नेपाल क्रिकेट बचाउनु छ भने अहिले वातावरण राम्रो बनाउन एकदम जरूरी छ। फ्यानको नजरबाट हेर्दा छुट्टै छ तर भित्री कुरा हामीलाई नै थाहा छ। फ्यानको नजरबाट हेर्ने हो भने मैले पनि 'सन्दीप टिममा किन छैन, किन उसले एटिट्युड देखाइरहेको छ' भन्थें होला। तर सन्दीप लामिछाने किन त्यस्तो गरिरहेको छ? त्यो कसैले बुझ्यो भने पछि गएर थाहा हुन्छ। यो कुरा समयले ने भन्नेछ। अहिले भन्न मिल्दैन। मैले बोल्नुभन्दा समयले भन्नेछ।
पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गरेको भन्दै फ्यानहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। खासमा सामाजिक सञ्जालमा भएको 'फलो-अनफलो'को विषय के हो?
जीवनको व्यक्तिगत रोजाइ हुन्छ। आज मैले भन्न मिल्दैन कि मलाई फलो गर्नुस्। मेरो लागि तपाईंले नै खाना बनाउनुस्। लाइफको आफ्नो मान्छेको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ। घरबार हुन्छ। त्यसैले जीवनमा के गर्ने हो त्यो मैले निर्णय लिएँ। धेरै कुरा भित्री कुरा छ मैले भनि सकें नि। कति जनालाई त थाहा नै छैन। जसले गर्दा भन्न सजिलो छ। मैले भने पनि सही समयमा सबै कुरा थाहा हुन्छ।
पारस खड्का र तपाईंको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् नि?
पारस दाइसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। पहिलाजस्तै थियौं। हामी राम्ररी बोल्छौं। अरू सबै नर्मल हो।
खेलाडी भनेपछि सबै एक अर्काका लागि समान नै हुन्। कप्तान-उपकप्तान सबैले अन्तिममा खेल्ने नेपालकै लागि हो। मैदानमा हामीले दिने शतप्रतिशत नै हो। त्योबाहेक नेपाल क्रिकेटले राम्रो गरिरहेको छ। बीचमा फेरि अलिकति खस्कियो। जबसम्म वातावरण राम्रो हुन्छ नेपाल क्रिकेट आफैं राम्रो हुन्छ।
नयाँ सिजनको आइपिएलको अक्सन हुँदैछ। दिल्लीसँग तपाईंको अझै एक सिजनको सम्झौता बाँकी छ। यही बीचमा दिल्लीले दुई जना भारतीय स्पिनरलाई टिममा भित्र्याएको छ। तपाईंको सम्झौता रकम पनि थोरै छ। अब दिल्ली छाडेर अर्को टिम रोज्नका लागि पहल समय भएन र?
छैन छैन। यदि मैले बंगलादेश प्रिमियर लिग खेल्न पाएर राम्रो गरेको भए दिल्लीले बढी रकममा लिन्थ्यो होला। ठीक छ दिल्लीबाट कम पैसा आए पनि अन्य लिगबाट राम्रै आइरहेको छ। जुन बेला हामीसँग केही पनि थिएन त्यतिबेला हामी केही न केही खोजिरहेका थियौं। अब त्यो कुरा पाउँदा हामीलाई सानो लाग्छ भने हामी जीवनको राम्रो मोडमा बाँचिरहेका छौं। आइपिएलले त्यतिबेला मेरो जीवन सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो। २० लाख भारू होइन १० लाख भारू पाएको पनि खुसी नै हुन्थे। किनभने आइपिएलले मलाई यहाँसम्म पुर्‍यायो। अरू लिगका लागि बाटो खोलिदियो। यस अर्थमा दिल्लीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
'द हन्ड्रेड'को अक्सनका लागि विश्वका चर्चित क्रिकेटरसँगै एक लाख पाउन्ड मूल्य राख्नुभयो। महँगो मुल्य राख्ने आत्मविश्वास कसरी आयो?
त्यो मेरो एटिट्युड हो। मैले कुनै कुराको हकदार छु भने त्यसका लागि म लड्छु। मलाई कति फोन पनि आएको थियो कि तपाईंले मूल्य कम राख्नुभयो भने तपाईं बिक्री हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। मैले हुन्न भनें। म एक लाख पाउन्डमै खुसी हुन्छ। यदि म हुन्छु भने त्यसका लागि हकदार छु। नभए पनि ठीक छ। केही समय विश्राम लिन्छु। तर त्यसपछि त सबैले म बिकेको देख्नु भयो नि।
(भिडिओ : विवेक राई)
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६, ००:१५:००